भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया सुरु - IAUA
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा सबैको लगत लिने र त्यसलाई आवश्यकताअनुसार स्थानान्तरण गर्ने या सोही ठाउँमा राख्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिने नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । उनले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनले जग्गा पाउन सकून् भन्ने बारेमा उपमहानगरले विशेष कार्ययोजना समेत बनाउने बताए । त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्थानीय कार्ययोजना बनाउन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
उपप्रमुख माया आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा कार्यालय प्रमुख भाष्कर गौतम सदस्य सचिव र डा. रेणुराज भण्डारी, नहकुल केसी, डा. चिरञ्जीवी रेग्मी, कोमल ओली, जोगराज गिरी, शोभाकर सापकोटा, सुरेन्द्र जिसी, भागवत पौडेल, विजय जीएम, गोविन्द शाहलगायतका २५ सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।
यसैगरी कार्यपालिकाको बैठकले विधायन समितिका संयोजक देवराज विश्वकर्माको संयोजकत्वमा सहकारी नीति निर्माणका उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका अन्य सदस्यमा विभिन्न सहकारी क्षेत्रमा व्यक्तिहरूलाई राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
नगरप्रमुख पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १९ को छिल्लीकोटमा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता श्याम डाँगीले जानकारी दिएका छन् ।
Previous Previous post: बाहिरी चक्रपथ आयोजना : जग्गा प्राप्तिको फाइल सदर
Next Next post: फेसनका नयाँ अनुहार समृद्धि र आशिर्वाद